“Waxaan rajeynayaa in Pogba uu sii joogo Old Trafford” xiddig ka tirsan Manchester United – Gool FM
(Manchester) 22 Luulyo 2019. Xiddiga reer Spain iyo kooxda Manchester United ee Juan Mata ayaa sheegay inuu rajeenayo in saaxiibkiis Paul Pogba uu sii joogo Red Devils xilli ciyaareedka soo socda, sababa la xiriira inuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican ee naadiga United-ka.
Magaca Paul Pogba ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Manchester United xagaagaan, maadaama uu ciyaaryahanka reer France sheegay inuu xiiseenayo tijaabinta loolan cusub oo meel kale ah.
Real Madrid iyo Juventus ayaa ah kooxaha ugu cad cad ee xiiseenaya inay helaan adeega xiddigan inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, iyadoo la fahansan yahay in tababare Zinedine Zidane uu si toos ah u codsaday laacibkan.
Hadaba sida laga soo xigtay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” Juan Mata ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in Pogba uu sii joogo garoonka Old Trafford waxaan uu yiri:
“Aqoon fiican ayaan u leenahay Paul Pogba, waa ciyaaryahan khadka dhexe ee aad u fiican, waa shaqsi aad u wanaagsan,wuxuu saameyn fiican ku leeyahay qof walba”.
“Waxaan u maleynayaa inuu ku faraxsan yahay halkaan, lakiin ma doonayo inaan ka hadlo mustaqbalka ciyaartoyda kale, waxaan doorbidaa inaan nafteyda oo kaliya ka hadlo”.
“Hadii aan u hadlo inaan ahay saaxiibka Paul Pogba, waxaan hubaa inuu sii wadi doono kooxda, isla markaana nala sii shaqeyn doono, waana ku faraxsanahay sababtoo ah waa ciyaaryahan muhim ah”.
Arsenal oo kalsooni ku qabta iney ku guuleysaneyso saxiixa Dani Ceballos & Hadii ay u dhaqaaqeyso Moise Kean.
“Waxaan ka codsaday wiilkeyga inuu u wareego Barcelona sanad kahor” - Aabaha Griezmann